YEYINTNGE(CANADA): Sunday, October 02
မြန်မာပြည်မှာတရုတ်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်း ... လား?.
by Hlaing Bwa on Sunday, October 2, 2011 at 2:02pm
ဒီကိစ္စလည်းမဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ရဦးမယ် ရွှေမြန်မာတို့ ။
by Ah Bayah on Sunday, October 2, 2011 at 9:20am
The Irrawaddy News Magazine [Covering Burma and Southeast Asia]Translated by: Hlaing Bwa / 88
♥۩۞۩♥ မြန်မာပြည်မှာတရုတ်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်း .... လား?.♥۩۞۩♥
သမတသစ်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သုံးရက်ကြာတရားဝင်တရုတ်ပြည်ခရီးမှာ ဘေဂျင်းအနေနှင့် (သူတို့ ရဲ့ ကျောက်ဖြူ
ဆိပ်ကမ်းကနေစမဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်လျှောက်ရေးအတွက်) မြန်မာဆိပ်ကမ်းတွေ
မှာတရုတ်ရေတပ်စခမ်းချနိုင်ရေးအတွက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆွေးနွေး မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
အခြားဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ နှစ်ဘက်စလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေး၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ
ဆက်ဆံရေး၊ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ ပါဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
နေပြည်တော်ရဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေအရ တရုတ်အရာရှိများအနေနဲ့သူတို့ ရဲ့ရေတပ်ကို မြန်မာရေပြင်ပိုင်နက်
အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ကို မကြာသေးမီလများအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ချဉ်းကပ်မူတွေလုပ်နေခဲ့ကြောင်း
သိရပါတယ်။ စူပါ-ပါဝါ ဖြစ်လာမဲ့ တရုတ်အနေနဲ့သူရဲ့ တရုတ်-မြန်မာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကိစ္စ၊
အန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ တရုတ်ရေတပ်လှုပ်ရှားနိုင်ရေးကိစ္စ၊ ဆိုမာလီပင်လယ်ဓါးပြတွေရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ ကင်းလှဲ့ 
နိုင်ရေး - စသည်တို့ ဟာ မြန်မာ့ရေပြင်ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့သိသာတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေပါပဲ။
"တရုတ်အရာရှိတွေက မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်ရေတပ်စခန်းထားဖို့ အကြံမပေးပါဘူး။ အန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ
ထဲမှာ ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓါးပြရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ ကင်းလှဲ့ တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေကို မြန်မာဆိပ်ကမ်းတွေမှာ ဆိုက်
ကပ်ခွင့်ပေးဖို့ ပါ" ဟု အမည်မဖေါ်လိုသော တရုတ်အရာရှိ ကပြောကြားသွားခဲ့ပြီး သည်ကိစ္စဟာ ဆွေးနွေးဆဲဖြစ်
ကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်ဘက်အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ သတင်းတွေအရ - တရုတ်ဟာသူ့ ဘက်က
ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရင်းနှီးမဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်းကစမဲ့ ကျောက်ဖြူ - ယူနံ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ပိုက်လိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်ဟာ "ရွှေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ "ကသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရဲ့ ၈၀% ရာနှုန်းကို ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်သွယ်ယူမှာဖြစ်ပြီး၊ သည်ကျောက်ဖြူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနဲ့ 
အာဖရိက မှဝယ်ယူတဲ့ရေနံတွေကို သယ်ယူရာမှာ အသုံးပြုမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်မှ - လောလောဆယ် ခန့် မှန်းခြေအားဖြင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကုဗပေ (၇) ထရီလီယံ
(၇၀၀၀၀ - ဘီလီယံ) ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွှေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်ကို (၂၀၀၄) ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ ရှိ
ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တရုတ်လိုပဲ စွမ်းအင်ဆာလောင်နေတဲ့အန္ဒိယရဲ့ (၂၀၀၇)ချဉ်းကပ်မူကို ပစ်ပယ်ပြီး တရုတ်ကိုထိုးပေး
ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သည်ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းမှာ ကျောက်ဖြူနားက ရမ်းဗျဲကျွန်း (Ramree Island)
ကလေယာဉ်ကွင်းကိုမွန်းမံအသုံးပြုဖို့ လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ရမ်းဗျဲကျွန်းနေ ပြည်သူများရဲ့အဆိုအရ တရုတ်
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာက ရမ်းဗျဲကျွန်းကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်အနေနဲ့ ဆိုမာလီကမ်းလွန်မှာ သွားနေတဲ့တရုတ်ရေနံတင်သင်္ဘောတွေရဲ့လုံခြုံရေး အတွက်သူ့ ရဲ့ပထမဆုံး
လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ရေတပ်ကို (ပစ္စဖစ်သမုဒ္ဒရာပြင်ပမှာ) ထားရှိနိုင်ရန်ရည်ရွှယ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ (၂၀၁၀) တုံးက
အန္ဒိယသမုဒ္ဒယာအတွင်းမှာ ပင်လယ်ဓါးပြရန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် Guangzhou နဲ့Chaohu တရုတ်
ရေတပ်သင်္ဘောနှစ်စီး ရန်ကုန်အနီးက သီလ၀ါမှာ ငါးရက်ကြာကျောက်ချထားခဲ့တာကို အဲသည်အချိန်က မြန်မာ
နဲ့ တရုတ်အစိုးရတို့ ရဲ့ မီဒီယာတွေမှာ တွေ့ မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အန္ဒိယသမုဒ္ဒယာထဲမှာ တရုတ်
ရေတပ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးလိုမူဟာ မြန်မာပြည် (အဲသည်အချိန်ကစစ်အစိုးရ) တင်မက တရုတ်ရဲ့ မဟာမိတ်ပါကစ္စတန်လည်း
ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ (စကားချပ် - ပါကစ္စတန်ဟာ အန္ဒိယကို ချိန်ခွင်လျှာညှိဖို့ အတွက် တရုတ်ကိုချသုံးတဲ့သဘောပါ။
လက်ရှိအခြေအနေအရလည်း ပါကစ္စတန်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာ ဘင်လာဒင်ကိစ္စကနေ တင်းမာနေတဲ့
သဘောရှိပါတယ် - လှိုင်ဘွား)။
Financial Times ရဲ့သတင်းအရ - ပါကစ္စတန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Claudhry Ahmed Mukhtar က
"အစ်လန်မာဘတ်(ပါကစ္စတန်) အနေနဲ့ Gwadar ဆိပ်ကမ်းကို တရုတ်ရေတပ်စခန်း အဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ 
ရှိနေပါတယ်" ဟုထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်ဘက်က သည်ကမ်းလှမ်းမူဟာ ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်
Yusuf Raza Gilaniaမေလဆန်းက တရုတ်ပြည်သို့ သွားခဲ့စဉ်အတွင်းကဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ 
ပါကစ္စတန်ဟာ သူတို့ ရဲ့အနှစ်ခြောက်ဆယ်မြောက် ဆက်ဆံရေးအခမ်းအနားကို သည်နှစ်အတွင်း
တရုတ်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ - တရုတ်အစိုးရအနေဲ့သမုဒ္ဒရာတခုတည်းရပ်တည်မူကနေ သမုဒ္ဒရာနှစ်ခု
(ပစ္စဖိတ် နဲ့ အန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ) လွှမ်းမိုးရပ်တည်နိုင်ရေးကို လိုလားတဲ့အတွက် အန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ရရှိရေးမှာ
ပါကစ္စတန်နဲ့မြန်မာ ဟာ အဓိကကျနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ တရုတ်ပညာရှင်
Li Chenyang နဲ့Lye Liang တို့ ရဲ့အစီရင်ခံစာအရ - တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မဟာဗျူဟာမြောက်
ကားလမ်း ရထားလမ်း နဲ့ လေဆိပ်တွေကို ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆွယ်သွယ်ပြီး အန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်
ကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ တရုတ်ပြည်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ ရေနံ နဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းတွေတည်ဆောက်
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခရီးအပေါ်က - တရုတ်ရေတပ်အခြေစိုက်ရေးကိစ္စနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အခြားကိစ္စရပ်တွေကတော့
ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ရှည်လျှားတဲ့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မျဉ်းတလျှောက်က လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့
အရေးကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းသတင်းတွေအရ တန့် ဆန်း လျှပ်စစ်ရေကာတာတည်
ဆောက်ရေးစီမံကိန်းက တရုတ်အင်ဂျင်နီယာ သုံးဦး မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတဦးနဲ့ အလုပ်သမားသုံးဦးတို့ ဟာ
မွန်းတောင်းနဲ့ မွန်းပန် မြို့ များအနီးမှာ မေလ(၁၇)ရက်နေ့ အထိ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တရုတ်
လုံခြုံရေးအဖွဲ့ တွေ ရှာဖွေနေခဲ့ပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ အစအနရှာမရသေးဖူးလို့ သိရပါတယ်။
တရုတ်ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ် Li Junhua ကပြောကြားရာမှာ သမတ
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်
သည်အတောအတွင်း မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအီးဟာ ဘေဂျင်းကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။
တရုတ်ဟာ မြန်မာစစ်တပ်များအတွက် အကြီးမားဆုံးသော လက်နက်ထောက်ပံ့နေသူဖြစ်ပြီး မြောက်ကိုရီး
ယားကတော့ မြန်မာပြည်အတွက် ဒုံးပျံနည်းပညာ မြေအောက်ဥမင်တည်ဆောက်ရေးကိစ္စ နဲ့ 
(ဖြစ်နိုင်ချေအားဖြင့်) နူကလီယားပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အထောက်အကူတွေကို ပေးနေတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်
Translated by: Hlaing Bwa / 88
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/02/20110အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စအပါအဝင် ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် အရှေ့ဥရောပမှာကြုံတွေ့နေဆဲ အဖြစ်အပျက်တွေကို သင်ခန်းစာယူဖို့ မိတ်ဆွေတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ယူကရိန်းရဲ့ လိမ္မော်ရောင်တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ ယူလီယာ တိုင်မိုရှန်ကို ( Yulia Tymoshenko) က သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို “ သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့ တော်လှန်ရေးအဖြစ်” နာနာကျင်ကျင်မှတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ မကြာခင်ကာလတုံးက သူမကို “ ရုရှားနိုင်ငံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့စာချုပ်ချုပ် ဆိုမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ ၂၀၀၄ ယူကရိန်းရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တဲ့ “ဗစ်တာ ယန်နူကိုဗစ်ခ်ျ”လို ကွန်မြူနစ်ဟောင်းတွေ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလာခဲ့တယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံရေးကို ပြန်လည်ချုပ်ကိုင်လာခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ လိမ္မော်ရောင်တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေဟာ “ သစ္စာဖောက်ခံခဲ့ရတယ်” လို့ ပြောတာထက်၊ “ သတိမဲ့ခဲ့တယ်” လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ် ထင်တယ်။ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အညှိုးအတေးတွေဟာ တချိန်ချိန်မှာ ပြန်လည်ရောက်လာလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို ထဲ့သွင်းစဉ်းစားထားသင့်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်။
ဗလာဒီမီယာ ပူတင် ဆိုတာ ကေဂျီဘီထောက်လှမ်းရေးဟောင်း၊ သူ့ကို ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေအပါအဝင် ပြည်သူအများအပြားကလည်း ထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ ရုရှားပြည်ကြီး ကို ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ နိုင်ငံတခုအဖြစ်အမြဲရှင်သန်စေချင်သူ။ စတာလင် ရဲ့ လူသတ်မှုတွေဟာ ရုရှားပြည်အတွက်လိုအပ်လို့လုပ်တာဖြစ်တယ် ဆိုပြီးထောက်ခံပြောဆိုခဲ့သူ။ အရောင်တော်လှန်ရေးတွေဆိုတာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် လို့ ယုံကြည်နေခဲ့သူ။ နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးကစားပွဲမှာ တရားခြင်း၊ မတရားခြင်းဆိုတဲ့ဝေါဟာဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်စရာမလို၊ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကို ဘယ်သူချုပ်ကိုင်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ဖို့ ဝန်မလေးခဲ့သူ။ “ ပူတင်” ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။
ရုရှားစီးပွားရေးသမားအများအပြားကို အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေဆီမှာ အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေတယ်။ မာဖီယားဂိုဏ်းတွေကိုလည်း လက်သတ်မွေးထားတယ်။ မီဒီယာတွေကိုဝယ်ပစ်တယ်။ ရုရှားပြည်ထောင်စု ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လိုလားမဲ့၊ အရှေ့ဥရောပသား နိုင်ငံရေးဇာတ်ကောင်တွေကို ပြန်လည်အသက်သွင်းအားဖြည့်တယ်။ သူ့ကို ဝေဖန်တဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ သတင်းထောက်တွေ ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တယ်။ အရောင်တော်လှန်ရေးတွေကို ပြန်လည်အနိုင်ယူမဲ့ အခြေအနေတခုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ ရုရှား သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူပြန်လည်အရွေးခံမယ် တဲ့။ မထူးဆန်းတဲ့ ကြေငြာချက်ပါ။
လိမ္မော်ရောင်၊ နှင်းဆီရောင် သင်္ကေတတွေ နဲ့ လွင့်မျောတောက်ပခဲ့တဲ့ သင်္ကေတတွေ အောင်မြင်မှုတွေကြားမှာ သာယာခဲ့ကြတယ်။ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ကန်ပိန်းတွေကြားမှာ စီးမျောခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ Real Politics လို့ခေါ်တဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝါကို ကစားဖို့အတွက် အသင့်မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားထက် ကန်ပိန်းသမားတွေက များနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အရှေ့ဥရောပမှာ “ပူတင်” ရဲ့ နှောင်ကြိုးတွေက ပြန်လည်ခိုင်မြဲလာခဲ့တယ်။
စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို တရုပ်ကြိုးစွဲသမျှ လိုက်လုပ်နေသူတွေအဖြစ်၊ စွပ်စွဲလေ့ရှိကြတယ်။ တချို့က ပေါင်းစရာလူမရှိလို့ တရုပ်ကိုပေါင်းရတာပါ လို့ သုံးသပ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာလည်း တရုပ်ကွန်မြူနစ်တွေကို ငယ်ကြောက်လို ချစ်ကြောက်ရိုသေရ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လွန်ဆန်မရတဲ့ သူတွေအများအပြားရှိတယ် ဆိုတာလည်း သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။ မန္တလေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသလို၊ တရုပ်သြဇာခံ လက်နက်ကိုင်သူပုန်အဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်။
“သူများပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ပါဘူး” လို့ကြွေးကြော်လေ့ရှိတဲ့ ကိုရွှေတရုပ်ကြီးက ခုတော့ “ တရုပ်ကုမ္မဏီတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်” ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်တွေနဲ့ ဗမာစစ်အစိုးရသစ်ကို ဖိအားပေးနေပါပြီ။ နယ်ချဲ့လက်သစ်ရဲ့ အစွယ်လေးက လှစ်ကနဲ ပေါ်လာပါပြီး ကျနော်တို့ချစ်တဲ့မြေကို မထီလေးစားလုပ်လို့လာပါပြီ။
ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ပြဿနာတွေက ရေကာတာ ပြဿနာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရှေ့ဥရောပမှာ ပူတင်ကြံစည်ခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေလိုမျိုး ဗမာပြည်ထဲမှာ အများအပြားအမြစ်တွယ်နေခဲ့တယ်။ သတိထားမိကြလိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို သတိနဲ့တိုးလို့ မြှင့်တင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့လိုမယ်။ ပြည်ပရန်ကို ပိုမိုသတိထားကြရပါလိမ့်မယ်။
DVB ပြည်တွင်းသတင်းလုပ်ငန်းကွန်ယက်မှာ ငွေအလွဲသုံးစားရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီး တာဝန်ရှိသူတွေက စက်တင်ဘာလ ၃၀ မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်.. အလွဲသုံးစားလုပ်တာ ၂၀၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဒေါ်လာ ၃သိန်းလောက်- မြန်မာငွေ သိန်း ၃၀၀၀ လောက်လို့ခန့် မှန်းပါတယ်.. အလွဲသုံးစားမှုမှာ ပါဝင်ပါတ်သက်မှု မရှိပေမယ့် အဖွဲ့ အစည်းတခုလုံး စီမံခန့် ခွဲရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးအေးချမ်းနိုင်နဲ့ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးခင်မောင်ဝင်းတို့ က စီမံခန့် ခွဲရေးတာဝန်ကနေ နှုတ်ထွက်ပေးပါတယ်.. ဒီကိစတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အဖြေမှန် အမှုမှန် အခြေအနေမှန် သိရအောင် နော်ဝေရဲဌာနမှာ အမှုဖွင့်ပြီး စံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလမှာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဝင် စပ်ဟန်ညောင်ရွှေက DVB ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးတာဝန် ယာယီ ထမ်းဆောင်ပါမယ်.
ဓါတ်ပုံ- နော်ဝေးရဲက ပြည်သူပိုင်ငွေ အလွဲသုံးစား အမှုအဖွင့်ခံထားရတဲ့ဒီဗွီဘီ ယူဂျီတာဝန်ခံ မျိုးမင်းနိုင်။) ဥပမာ>ဇော်နိင်ဦး (လူဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှုး ) ဟာလဲ တော်လှန်ရေးရံပုံငွေတွေ ကို ထင်တိုင်းသုံးဖြုံးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာ အကျင့်ပြတ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ယခုအခါမှာ နော်ဝေး နိင်ငံ အော်စလိုမြို့ မှာပဲ ခိုအောင်းနေဆဲဖြစ်တယ်။ သူကိုလဲ ထိရောက်စွာအရေးယူဖို့ လိုတယ်။
ဒီဗီင်္ွဘီ လာဘ်စားမှု ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာပြီ။ စစ်တပ်ထဲမှာပဲလဘ်စားတာမဟုတ် ဒီမိုတွေမှာလဲ ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေရှိနေတယ်။
ငွေကြေးအရှုပ်အရင်းကြောင့် တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့ခင်မောင်ဝင်း
ဒီကိစတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အဖြေမှန် အမှုမှန် အခြေအနေမှန် သိရအောင် နော်ဝေရဲဌာနမှာ အမှုဖွင့်ပြီး စံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလမှာ ဘုတ်အဖွဲ့ ဝင် စပ်ဟန်ညောင်ရွှေက DVB ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးတာဝန် ယာယီ ထမ်းဆောင်ပါမယ်။
by Myit Makha Mediagroup on Sunday, October 2, 2011 at 5:51pm
ယနေ့နေ့ လည်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရန်ကုန် လှည်းတန်း ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်အနီး ဆန္ဒပြပွဲနှင့် အခြေခံ အကြောင်းရင်းများ။
ရန်ကုန် လှည်းတန်း ပြည်မြန်မာ ကုန်တိုက်အနီးမှာ ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု ယနေ့နေ့ လည်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ယခင်တစ်လောက ဖြစ်ခဲ့သည့် ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်မှ ဆိုင်ခန်းများအား လေလံတင်ရောင်းချပြီး နစ်နာကြေးငွေ မပေးမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ယနေ့နေ့ လည်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရန်ကုန် လှည်းတန်း ပြည်မြန်မာကုန်တိုက်အနီး ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပွားရတဲ့အခြေခံ အကြောင်းရင်းများကတော့ -
"ရန်ကုန်မြို့ ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီးရှိ ပြည်မြန်မာကုန်တိုက် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း အရှုပ်တော်ပုံကိစ္စအား တိုင်ကြားအသိပေးခြင်း - http://niknayman-niknayman.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html"
"ရန်ကုန် လှည်းတန်းလမ်းဆုံက ပြည်မြန်မာကုန်တိုက် မတရား သိမ်းပိုက်ခံရခြင်းလုပ်ရပ်ဟာ သိန်းစိန်တို့ ပြောနေတဲ့ သန့် ရှင်းအစိုးရဖြစ်ဖို့ပြောနေတာနဲ့လွဲနေ - http://niknayman-niknayman.blogspot.com/2011/07/blog-post_8934.html"
"အတိတ်ဖြစ်ရပ်ဆိုး၊ ခါးသီးဝေဒနာအိမ်မက်နဲ့ ခေတ်သစ်အတွက် သင်ခန်းစာအသစ် ဖွင့်မဲ့ လည်းတန်း ပြည်မြန်မာကိစ္စ - http://niknayman-niknayman.blogspot.com/2011/07/blog-post_8916.html"
ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှ မခင်မျိုးလွင်နဲ့မသီတာတို့ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီလို မတရားဖမ်းဆီးမှုတွေဟာ ယခုထိတိုင်အောင် ဖြစ်နေတာမို့သိန်းစိန်တို့ ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ အပြောသာရှိပြီး လက်တွေ့ မှာတော့ လွဲချော်နေတုန်းပါဘဲ။
အခုတလောပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှုများဟာ ထင်ထားတာထက် အများကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနေတာမို့ မျက်ခြေမ မပြတ်မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်နေရုံနဲ့ မလုံလောက်လို့ မျက်ခွံကိုပါ ကရိန်းနဲ့ မတင်ထားရတဲ့ကိန်း ဆိုက် နေပါပြီ။
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့ စက်တင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့က အစိုး ရသစ်လက်ထက်မှာ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာရာ မှာတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိစ္စ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းကိစ္စ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်ရန်ကိစ္စနဲ့ ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရင်ဆွေးနွေးပွဲများနဲ့ မတူ- ထူးခြားတာက သတင်းထောက်များရဲ့ မေးခွန်းတချို့ကို လက်ခံဖြေကြားသွား တာတွေ့ရပါ တယ်။
သတင်းထောက်များက NLD ပါတီအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ၊ မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသားကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားကိစ္စရပ်များအပါအဝင် NLD ရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်တွေကို မေးကြ တာပါ။ ဒါတွေဟာ အများပြည်သူသိလိုတဲ့ မေးခွန်းများဖြစ်တယ်ဆိုတာ အငြင်းပွားစရာမလိုပါ။
ဒါပေမယ့် အသီးတရာအညှာတခုဆိုသလို သည်မေးခွန်းအားလုံးရဲ့အဖြေဟာ တနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ အလွန်သိမ်မွေ့ညင်သာတဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေတာမို့ သည်အချက်ကို လူသိရှင်ကြားဘယ်သူကမှ ထုတ်မပြော ကြသေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှု၊ ပြည်သူအပေါ်မေတ္တာထားမှုဆိုတဲ့ သီလတ ရားများသာမက ဉာဏ်ပညာထက်မြက်မှု၊ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းတဲ့တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်မှုတခုချင်းသာမက တစုံလုံးကို သ ဘောပေါက်နားလည်မှု၊ အမျှော်အမြင်ကြီးမားမှုဆိုတဲ့ “ပညာ” ရဲလက္ခဏာများကို ယုံကြည်ကိုးစားကြတာမို့ အချိန်အခါ ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ သည်အညှာကို ဒေါ်စုအနေနဲ့ မလွဲမသွေ ဆုပ်ကိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမျှော်လင့်နေသူတွေ ထောင်သောင်းမက ရှိပါတယ်။
ကျနော်ပြောနေတဲ့အညှာ၊ အထူးသဖြင့် ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အမှန် တကယ်ဦးတည်စေနိုင်တဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးအောင်ကြည်ဆွေးနွေးတဲ့အချက် (၄) ချက်စလုံးကို ပြေလည်စေနိုင်တဲ့အရာ၊ အုပ်စိုး သူအဆက်ဆက်ရဲ့ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကို ခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့ အပြစ်မဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုရဲ့ နာကျည်းခါး သီးမှုတွေ ကို လျော့ပါးလွင့်ပျောက်စေပြီး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး အရှိန်အဟုန်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေမယ့်ဆုံချက်ကတော့ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်း” တခုကို တီထွင်ဖန်တီးဖို့ပဲ ဖြစ်လာပါတယ်။
သမတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလုပ်နေတယ်လို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသာမက ကမ္ဘာက လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းနေတာကို ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါ။ လက်ခံသူရှိမယ်၊ လက်မခံသူရှိမယ်၊ ကျေနပ်သူ ရှိမယ်၊ မကျေနပ်သူရှိမယ်၊ သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်သူရှိမယ်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေရှိတယ်။ ဒါသဘာဝပါ။ သည်နေ ရာမှာ မေးခွန်းထုတ်ကြည့်တယ်။ သမတကြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ အခုလိုလုပ်လာရတဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲပေါ့။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအသက်ဝင်ရေးနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ချောမွေ့ ညင်သာစွာအ ကောင်အထည်ဖော်ရေးပဲလို့ ယူဆရပါတယ်။ တဖက်ကလည်း သမတကြီး ကတိပြုထားတဲ့ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး (Good Governance)၊ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ (Clean Government)၊ ဒီမိုကရေစီကျင့် စဉ် (Democratic Practice) များ ထွန်းကားရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ ပွင်းလင်းမြင် သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုလျှော့ချခြင်း၊ သဟဇာတဖြစ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်ရေး၊ စီးပွားရေး ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အလုပ်နဲ့ သက် သေပြနေတာလက်တွေ့မို့ သမတကြီးရဲ့ Commitment ကို သံသယရှိစရာမလိုပါ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုလိုချင်တာကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာ မြန်မာပြည်ပြဿနာအားလုံးရဲ့ အဖြေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက အထိမခံနိုင်တဲ့ အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့အခင်းအကျင်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD ရဲ့ ၂၉ မတ် ၂၀၁၀ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ပူးတွဲပါသုံးသပ်ချက်များကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လုံးဝဖျက်သိမ်း ဖို့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပဲ ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ ယူဆရတဲ့အချက်အလက်အချို့ကို ပြင်ဆင် ပေးဖို့တောင်းဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ အတိုက်အခံများရဲ့ အထူးသဖြင့် NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ် ရှားမှုများအပေါ်အစဉ်အကဲဖြတ်လေ့လာနေတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ သည်ကိစ္စကို သတိမထားမိမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင် ရွှေဂုံ တိုင်ကြေညာချက်ပါ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတင်ပြချက်များဟာလည်း အသေမဟုတ်ဘဲ ပြုလွယ်ပြင် လွယ်တဲ့အရာ များ ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းသာစရာကောင်းတာက သည်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမတကြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ ပျော့ ပြောင်းတဲ့ပေါ်လစီရှိတဲ့အရိပ်အယောင်တချို့တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော်သမတကြီးက “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှု ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးဖွင့်လှစ်ကာ ကျနော်တို့ ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာကို ထုတ်ဖော်ပြသဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်” လို့ မိန့်ကြားတာတွေ့ရတဲ့အပြင် နောက်တပိုဒ် မှာ …
“အလားတူ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများကိုလည်း သဘောထား အမြင်ကွဲလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခလျော့ပါးအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်” လို့ ဆိုတာတွေကို အပြု သဘောဆောင်တယ်လို့မှတ်ယူပြီး ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စက်တင်ဘ ၂၉ ရက်နေ့က RFA နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သမတကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကို ကိုလှိုင် ကလည်း ကမ္ဘာမှာပြင်မရတဲ့ အခြေခံဥပဒေမရှိကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှာတောင် ယခင်က တပ်မတော်သားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ပုံစံထားရှိခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို ကိုးကားပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။
သမတကြီးနဲ့ သမတကြီးရဲ့အကြံပေးတို့ ပြောဆိုချက်များဟာ လုံလောက်တဲ့ ပြည်သူတရပ်လုံး ကျေနပ်စေတဲ့ ကတိက ဝတ်အဆင့်မဟုတ်သေးပေမယ့် အလိမ်ခံရဦးမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေသူတွေရဲ့ ပူပင်သောကကို မလျော့ပါးနိုင်သေးပေမယ့်- ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာအခြေအနေမျိုး၊ သားရွှေအိုးထမ်းလာတာ မြင်ရတာ မျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်များဖြစ်တယ်ဆိုတာ လွန်မယ်မထင်ပါ။ သေချာတာတခုကတော့ ၂၀၀၈ အ ခြေခံဥပဒေများထဲက တချို့ပုဒ်မတွေဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်နဲ့ သမတကြီး ခဏခဏပြော နေတဲ့ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး၊ သန့်ရှင်းသောအစိုးရနဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များထွန်းကားရေး စတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပြုပိတ်ပင်နေတာကြောင့် သင့်တော်တဲ့တချိန်ချိန်မှာ မုချဖျက်သိမ်း ပစ်ရမှာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတဖက်ကလည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လတ်တလောကာလမှာ အကုန်အစင်ဖျက် သိမ်းရေးကို အတင်းအဓမ္မ လုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပန်းတိုင်ပျောက်ဆုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်စဉ်များနဲ့ ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။
အခြေခံသဘောကတော့ ယခုလိုကာလမျိုးမှာ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လုံးဝမပြုပြင်ပဲ သည်အတိုင်း ဆက်လက် တည် မြဲဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာ အစွန်းတဖက်ဖြစ်သလို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အကုန်အစင် ဖျက်သိမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဟာလည်း အ စွန်းတဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ သည်အစွန်း (၂) ဖက်လုံးဟာ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်ကြိုးပမ်းရ မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေး၊ သဟဇာတဖြစ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်စဉ်များကို မုချမသွေထိပါးစေမှာ ဖြစ်ရုံသာ မက ပြည်သူလူထုရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစွန်းနှစ်ဘက်ကို ရှောင်ရှားပြီး အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ ဟန်ချက်- မျှခြေတခုကို နိုင်ငံရေးအနုပညာမြောက်မြောက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အဖြေ ရှာကြရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ Frame Work တွင်းကသာ ဖြေရှင်းကြမယ်ဆို ရင် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာမရှိလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ သမတကြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရကြားမှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှု ဟာ အရှိန်ရနေပါပြီ။ လူထုကြီးကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးစီးပဲ့ကိုင်မှုကို ဦးလည်မသုန်နာခံမှာကို သံသယရှိ စရာမလိုပါ။ သမတကြီးရဲ့ အမျှော်အမြင်ကြီးမားမှုနဲ့ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်များကြောင့်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အ ရှိန်ရလာပြီး ပြဿနာအားလုံးရဲ့သော့ချက်ဖြစ်တဲ့ နှစ်ဖက်အင်အားစုများအကြား သံသယတွေကို လျော့ပါးစေရုံသာမက ယုံကြည်မှုများတိုးပွားစေမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသာမက လွှတ်တော်ပြင်ပက သင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင် နိုင်တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကော်မရှင်တရပ် (ကော်မတီ မဟုတ်ပါ) ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မကြာ ခင်ကာလအတွင်း စတင်အသက်သွင်းဖို့လိုပြီလို့ ထင်မြင်ပါကြောင်း။
အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို...